4:20 pm 2020-08-23
देशका ४० भन्दा बढी जिल्लामा भएको निषेधाज्ञाले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोक्न सकारात्मक काम गरेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने निषेधाज्ञाको सकारात्मक प्रभाव आगामी साताबाट देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।
निषेधाज्ञाले सकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले समेत राजधानीमा आउने साताबाट संक्रमितको संख्यामा कमी आउने सक्ने विज्ञको अनुमान रहेको छ ।
उपत्यकामा शनिबार मात्रै देशभरिको दाँजोमा करिब एक तिहाइभन्दा बढी ९२१६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर यस दिन ६ सय ३४ जना संक्रमित थपिएका थिए । निषेधाज्ञाले संक्रमण विस्तारमा कमी भएको आकलन छ, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेको पनि ।
‘राजधानीमा अझै निषेधाज्ञापछिको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर उपत्यकाबाहिर पहिलेदेखि नै निषेधाज्ञाले गर्दा संक्रमण विस्तारमा कमी हुने संकेत मिलेको छ ।’
1:44 pm 2020-08-22
कोभिड १९ का लागि उपयोगी हुनसक्ने औषधि रामदेसिविर भारतका तीन कम्पनीले नेपालका लागि वितरण गर्न थालेका छन् । कोभिड १९ का बिरामीको लागि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्ने औषधिको रुपमा यसलाई सिफारिस गरिएको थियो । भारतीय एनडीटीभीले औषधि उत्पादक कम्पनी म्यालन,किप्ला र हेटेरो ड्रग्सले नेपालका लागि उक्त औषधि उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
1:42 pm 2020-08-22
नेपालमा एक जना संक्रमित पत्ता लगाउन एक लाख चार हजार ६३० खर्च भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० हजार ४८३ संक्रमित पत्ता लगाइएको र रु पाँच हजार ५०० प्रतिपिसिआर परीक्षण खर्च भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म पाँच लाख ७९ हजार ८९९ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिसकेको छ । रु तीन अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार ५०० पिसिआर परीक्षण खर्च भएको छ । “एउटा संक्रमण भेटाउनका लागि सरकारले अहिले एक जनामा एक लाख ४ हजार ६३० रुपियाँ खर्च भएको छ । उपचारमा खर्च एक व्यक्तिको ३० दिन राख्दा चार लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ, ”, उहाँले भन्नुभयो , “ यसरी कोरोनाको जाँच गर्ने र पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने पद्धति धेरै नै खर्चिलो भएको छ । जरुरी काम नपरीकन बाहिर ननिस्कनु होला ।”
उहाँले बाहिर निस्कनै पर्‍यो भने दुई मिटरको दूरी कायम गरी मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न तथा घर गइसकेपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
उहाँले संक्रमण रहेका टोलटोलमा अहिले पनि खुला हिँड्ने र नाचगान गरिएको पाइएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले धेरै जनामा संक्रमण फैलियो भने उपचारका लागि समस्या झनै थपिने बताउएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
नेकपाका बरिष्ठ नेता एबम पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका सात अङ्गरक्षकमा कोरोना सङ्क्रमण
1:32 pm 2020-08-22
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का बरिष्ठ नेता एबम पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सात अङ्गरक्षक पीएसओ लाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका सबै परिवार उहाँको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको स्वाब परीक्षण गर्दा अङ्गरक्षकहरुको मात्र कोरोना पोजिटिभ देखिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।
हिजो गरिएको परीक्षणको आज प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सहित अन्य सबैको नेगेटिभ आएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । अङ्गरक्षकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएलगत्तै आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको स्वकीय सचिव गौतमले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट २४ घण्टामा ११ जनाको मृत्यु
1:08 pm 2020-08-22
२४ घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा १ महिला र १० जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३७ पुगेको छ।
हाल क्वारेन्टिनमा रहेको संख्या १२ हजार २३४ रहेको छ भने आइसोलेसनमा १२ हजार १३२ जना छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या १८ हजार २१४ रहेको मन्त्रालयले जनाएको खबर आजको नागरिकले प्रकाशन गरेको छ ।
12:37 pm 2020-08-22
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण दुई वर्षभन्दा कम समयमै अन्त्य हुन सक्ने बताएको छ । सन् १९१८ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लुको तुलनामा कोरोना महामारी नियन्त्रण सफल रहेको डब्ल्यूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानम गेब्रियससले बताएका छन् ।
भूमण्डलीकरण र विश्वभरका मानव एकअर्काको सम्पर्कमा रहेका कारण कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा चाँडो फैलिएको उनले बताए । तर, हालको विकसीत विज्ञान र प्रविधिका कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण सफल हुने धेरै सम्भावना रहेको टेड्रोसले बताए ।
सन् १९१८ फ्रेबुअरीदेखि १९२० अप्रिलसम्म दुई वर्ष लामो समयमा फैलिएको स्पेनिस फ्लु नियन्त्रणमा निकै कठिनाइ भएको थियो । उक्त महामारीले विश्वभरका २ करोड मानिसको ज्यान लिएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा
3:53 pm 2020-08-21
चितवन । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि प्रभावित भएको भरतपुर अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा आएको छ । अस्पतालका ५ चिकित्सक, २ स्वास्थ्यकर्मी र १ जना सहयोगीमा कोरोना सङ्क्रमण भएपछि पाँच दिनदेखि प्रभावित सेवा बिहीबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
अस्पतालले आकस्मिक सेवा मात्र दिँदा बिरामी प्रभावित भएका थिए । अस्पतालका सेवा सञ्चालन भएसँगै बिरामी आउन थालेको अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. रामप्रसाद सापकोटाले बताए ।
बिहीबार राति मात्र ३ प्रसूतिका बिरामीमा समस्या आएपछि अस्पतालबाट सेवा उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । निजी अस्पतालले नहेरेका र आर्थिक कारणले अन्य अस्पताल जान नसकेका बिरामी सरकारी अस्पताल आउने थालेको उनले बताए । सापकोटाले भने, “हाम्रो विभागको विभागीय प्रमुख बाहेक सबैको कोरोना नेगेटिभ देखिए पछि हामी उपचारमा जुटेका छौँ ।”
बिरामीमा सङ्क्रमण भएमा राख्नका लागि ठाउँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक कर्मचारीको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएको सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले बताए । केहीको मात्र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको र भोलि सम्ममा नतिजा आउने उनको भनाइ छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले अस्पतालका अधिकांश सेवा सुरु भएको बताए । सघन उपचार कक्षमा सुरु भैनसके पनि निर्मलीकरण भै सकेकाले सब सञ्चालान गर्न सकिने उनले बताए ।
हाल जिल्लाका अधिकांश निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा पनि कोरोना सङ्क्रमित उपचार गर्न थालिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशिका पूर्ण पालना गरेर सङ्क्रमितको सरकारी अस्पतालमा उपचार भएकाले बिरामीले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
भरतपुर अस्पतालमा चितवन सहीत १९ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । यो अस्पताल प्रसुतिका लागि अग्रणी मानिन्छ । वार्षिक १३ हजार हाराहारी प्रसूतिका लागि आउने गरेको तथ्याङ्क छ । बीमाको सुविधासमेत यहाँ भएकाले अस्पतालबन्द हुँदा बिरामी प्रभावित भएका थिए । रासस
आयुर्वेदिक औषधि बोकेर बुटवलका मेयरसहितको टोली कोरोना संक्रमितको दैलोमा
4:42 pm 2020-08-20
बुटवल — भाद्र ४, २०७७।
होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो बढेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले उनीहरुको अवस्था बुझ्न घरदैलो अभियान सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ‘हटस्पट’ बन्‍ने जोखिम
3:13 pm 2020-08-20
काठमाडौं जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै संक्रमितको उपचार गर्न तत्काल १० हजार शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड पर्याप्त नहुँदा संक्रमित व्यक्ति घरघरमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं डीसीसीएमसीले राजधानीका थप ९ अस्पताल र एक आवास केन्द्रको संरचनालाई ‘कोभिड–१९’ डेडिकेटेड उपचार केन्द्र बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
सीसीएमसीलाई उक्त सिफारिस गरेलगत्तै मंगलबार साँझ बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकले भदौ १० गतेसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने खतरा बढेपछि थप डेडिकेटेड उपचार केन्द्र बनाउन सिफारिस गरिएको बताए । ‘आइसोलेसन बेड अभावमा संक्रमित घर तथा टोलटोलमा बस्न बाध्य छन्, यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाका संरचनालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि थप नौ अस्पताल र एक आवास केन्द्रलाई कोभिड–१९ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’ सिफारिस गरेअनुसारका स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
ठूला र व्यवस्थित पूर्वाधार भएका क्वारेन्टाइन तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका संरचनामा पनि आइसोलेसन शय्या सीसीएमसीमा सिफारिस गरिएको छ । डीसीसीएमसीले सतुंगलस्थित मनमोहन मेडिकल कलेज, डिल्लीबजारको नेसनल मेडिकल कलेज, बालाजुको जनमैत्री अस्पताल, इचंगुनारायण आवास, वसुन्धराको महेन्द्रनारायण निधि स्मृति अस्पताल, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेज, कलंकीको सहिद मेमोरियल अस्पताल, बालाजुको विनायक अस्पताल र वसुन्धराकै चिरायु अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो । मनमोहनमा ५ सय शय्या, नेसनलमा २ सय ५०, जनमैत्रीमा १ सय, इचंगुनारायण आवासमा ४ सय, नेपाल मेडिकल कलेजमा ६ सय ४१, महेन्द्रनारायण निधि स्मृति अस्पतालमा २ सय ५०, किस्ट मेडिकल कलेजमा ५ सय, सहिद मेमोरियलमा १ सय, विनायक र चिरायुमा क्रमशः ५५ र ६५ शय्याका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसअघि प्रशासनले यी अस्पताल र आवास गृहको भौतिक संरचनाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनिक बल प्रयोगलाई बढाए पनि आइसोलेसन आवश्यक मात्रामा थप्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले उपत्यकामा आइसोलेसन शय्याको संख्या ६ सय रहेको बताए ।
यसअघि सरकारले देशभर हरेक अस्पताललाई २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई एक तिहाइ आइसोलेसन शय्या कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको पनि पालना हुन सकेको छैन । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी निर्देशन नमान्ने अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले चेतावनी दिए । काठमाडौं प्रशासनले सीसीएमसीमा पठाएको पत्रमै संक्रमणको दरअनुसार उपचार र पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंका अन्य स्थानीय तहले सिफारिस गरेका स्वास्थ्य तथा अन्य संरचनामा पनि ३ हजार शय्याका आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्न तत्काल सहरी विकास मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने पनि पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा ५ वटा एम्बुलेन्स कोभिड–१९ केन्द्रित रहेकामा थप १० एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रशासनले महानगरलाई र नगरपालिकाको हकमा २/२ वटा एम्बुलेन्स तयारी हालतमा राख्न भनिएको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले बुधबार रातिबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तीन जिल्लाकै संयुक्त सुरक्षा समिति बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम भयावह बनेको निष्कर्षसहित अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र भदौ १० गतेसम्म बन्द गरेका हुन् । काठमाडौं डीसीसीएमसीले कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा लगेर उपचारको व्यवस्था नगरिए राजधानी हटस्पट बन्ने जोखिम औंल्याएको छ । तर यसै मेसोमा बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सीसीएमसीका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारीको संयुक्त बैठकमा भने सरकारले गरेका कामको मात्रै फेहरिस्त पेस गरियो । राजधानीमा निषेधाज्ञा लागू हुनु अघिल्लो दिन बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक छलफल र समीक्षामै केन्द्रित थियो । अहिलेसम्म सीसीएमसी, विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट भएका कामको प्रगति मात्रै पेस गरियो । जोखिम टार्न ठोस निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले पनि सहभागी सबैका कुरा सुने मात्रै ।
करिब एक घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीहरू भने बोलेनन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले फिल्डमा संक्रमणको अवस्था र सरकारले गरेका कामकारबाहीप्रति सकारात्मक र कमीकमजोरीबारे सत्यतथ्य ब्रिफिङ नै हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘यस्ता संकटका बेला बैठक बस्दा पनि प्रशासनबाट आएका सुझाव र सल्लाह अनि जोखिम न्यूनीकरणबारे ठोस निर्णय हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीलाई फिल्डमा भइरहेको वास्तविकताबारे स्पष्टसँग कुरै राखिएको छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसको असर संकट सामना गर्न तत्काल लिनुपर्ने निर्णयमा देखिएको छ ।’
एक दिनमै हजार नाघे कोरोना संक्रमित
2:26 pm 2020-08-19
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनमै एक हजार नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार १ हजार १६ जनामा संक्रमण पुष्टि गरेको हो।
गत माघ ९ गते पहिलो संक्रमण देखिएयता यो हालसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित संख्या हो। यसअघि असार १९ गते ७ सय ४० जना संक्रमित फेला परेका थिए। मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामै २ सय ५ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले मुलुकभरका प्रयोगशालामा १३ हजार ४ सय ६१ पीसीआर परीक्षण गर्दा मंगलबार यो मात्रामा संक्रमित भेटिएको बताए। उनका अनुसार उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा १ सय ३८, ललितपुरमा ५० र भक्तपुरमा १७ जना संक्रमित थपिएका छन्।
शुक्रबार मुलुकभर ५ सय ९४ जना संक्रमित थपिएका थिए। त्यस्तै शनिबार ४ सय ६८ र आइतबार ६ सय ४१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। मंगलबारको कोरोना पोजिटिभको वृद्धि ७.५५ प्रतिशत हो।